Mas’uuliyiin ka soo jeeda Puntland Oo Un-ka U isticmaala dhabar jabinta dowladda Xog Culus « AYAAMO TV
Mas’uuliyiin ka soo jeeda Puntland Oo Un-ka U isticmaala dhabar jabinta dowladda Xog Culus
452 Views Date March 6th, 2014 time 4:35 pm
Garyaqaan Cali Xuseen (Cali Baajuun) oo ka mid ah Garyaqaanada Soomaalida ayaa ku dhaliilay qaar ka mid ah hayádaha hoos-taga Jimciyadda Qurumaha ka dhexeysa (UN) in ay ku howlan yihiin fashilinta dowladda Soomaaliya, iyaga oo adeegsanaya qaar ka mid ah wakaaladaha wararka, oo ay siinayaan warbixinno dicaayado lagaga fidinayo dowladda.
Waxa uu sheegay in ololaha mijaxaabinta dowladda ay horseed ka yihiin shaqsiyaad ka soo jeeda maamul goboleedka Puntlad oo ay dhibeyso horumarka dowladda iyo soo celinta Qaranimadda, sida uu yiri Garyaqaanka waxaana ugu horeeya Yuusuf BARI-BARI oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya Swizerland.
“Kuwa doonaya in ay dowladdu dhabarka ka jabto oo ay ugu horreyso Puntland & hay’adaha UN-ka hoos taga oo ay dhibeyso nabadda Soomaaliya ayaa iska kaashanaya in ay dacaayado raqiis ah ka fidiyaan dowladda” ayuu yiri Garyaqaan Cali Baajuun, wuxuuna intaa ku daray in dowladda looga baahan yahay in ay qaab sharci ah kaga hortagto shirqooladaasi dibedda kaga imaanaya.
“Monitoring Group billihii u dambeeyey 3 eedeymo oo kulligood wada been abuur ah ayey dowladda ka faafisay. Yaa ka daba tegay.? safiirka dowladda u fadhiya Nairobi ayaa looga baahan yahay inuu dacweeyo Monitering Group & Reuters, haddii sidaas lagaga aamuso waxey ku dhici doonaan mar kale in ay warbixinno been abuur ah faafiyaan” ayuu yiri Garyaqaankaas.
Waxa uu intaa ku daray in dagaalka ku furan dowladda uusan aheyn oo keliya dagaalka Alshabaab, balse ay jirto dagaal kale oo ay ku hayaan kooxo qaswadayaal ah oo ay shisheeye u isticmaalayaan in ay ku burburiyaan dowladda.